मेडिकेयर २०२० परिवर्तन गर्दछ: तपाईलाई यस बर्ष मेडिकेयरको बारेमा के थाहा हुनुपर्दछ - कम्पनी | सेप्टेम्बर 2021
कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा समाचार, कल्याण घरपालुवा जनावर मनोरञ्जन स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी औषधि जानकारी, समाचार भारी खेल समुदाय, कम्पनी औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय, कल्याण कम्पनी, औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार औषधि जानकारी
मुख्य >> कम्पनी >> यस वर्ष मेडिकेयर परिवर्तनहरूको बारेमा तपाईंलाई के थाहा हुनुपर्छ
यस वर्ष मेडिकेयर परिवर्तनहरूको बारेमा तपाईंलाई के थाहा हुनुपर्छ
मेडिकेयर एक सरकार द्वारा अनुदानित स्वास्थ्य बीमा प्रोग्राम हो जुन 65 65 बर्ष वा माथि उमेरकालाई, र केहि वयस्कहरू 65 65 बर्ष भन्दा कम उमेरका अशक्त छन्। एक अनुमान १%% अमेरिकीहरू मेडिकेयरमा भाग लिनुहोस्। धेरै व्यक्तिसँग मेडिकेयर भए पनि, यसलाई बुझ्न अझै कठिन हुन सक्छ। यसले सहयोग गर्दैन कि कार्यक्रमका केही तत्त्वहरू सामान्यतया वर्ष बर्ष परिवर्तन हुन्छन्। यहाँ २०२० मेडिकल परिवर्तनहरू छन् जसको बारेमा तपाईंलाई थाहा हुनुपर्दछ।
रक्तचाप तल ल्याउने प्राकृतिक तरिका
२०२० मेडिकेयर परिवर्तनहरू
यस वर्ष मासिक प्रीमियम अधिकांश मेडिकेयर लाभार्थीहरूको लागि बढ्दो छ, केहीको लागि तिनीहरू%% सम्म बढ्छन्। मेडिकेयर र मेडिकेड सेवाहरूको लागि केन्द्रहरू , वा CMS, यसको पछाडि यो तर्क वर्णन गर्‍यो: पार्ट बी प्रीमियम र कटौतीयोग्यमा बृद्धि मुख्यतया चिकित्सक-प्रशासित औषधिहरूमा बढ्दो खर्चको कारण हो। यी उच्च लागतहरु एक तरल प्रभाव छ र उच्च भाग बी प्रीमियम र कटौती योग्य मा परिणाम।
यहाँ २०२० मा अन्य प्रमुख परिवर्तनहरूको एक हाइलाइट छ:
मेडिकेयर पार्ट ए र पार्ट बी प्रीमियम (तिनीहरूलाई भुक्तानी गर्नेहरूको लागि) २०२० का लागि उच्च हो।
मेडिगाप (वा मेडिकेयर पूरक बीमा) योजना सी र प्लान एफ अब २०२० मा मेडिकेयरका लागि योग्य हुनेहरूका लागि प्रस्ताव गरिएको छैन।
उच्च आय प्रीमियमको लागि आय कोष्ठक मेडिकेयर भाग बी र को लागि समायोजित गरिएको छ भाग डी । यी कोष्ठकहरूले मेडिकेयर प्राप्त गर्ने करीव%% लाई असर गर्ने छ। हेर्नका लागि यदि यसले तपाईंलाई प्रभाव पार्छ, त्यहाँ एक चार्ट उपलब्ध छ CMS वेबसाइटमा यहाँ ।
मेडिकेयरले पार्ट डी कभरेज खाली गरिरहेको छ, वा डोनट प्वाल ।
मेडिगाप योजना को एक नयाँ वर्ग को शुरू गरीरहेको छ, योजना जी, एक उच्च घटाया मेडिकेयर पूरक बीमा योजना। यो नयाँ पूरक योजना डाक्टरलाई भेट्न विरलै आवाश्यक पर्नेहरूका लागि राम्रो छ। यस योजनामा, तपाईंको pocket २33० को घटाउन नसक्दासम्म तपाईंको आउट-अफ-पकेट खर्चहरू भुक्तान गर्नुहोस्। यस पछि, तपाईंको पूरक बीमा योजना मेडिकेयरले कभर नगरेको तपाईंको अन्य स्वास्थ्य सेवा शुल्कहरू भुक्तान गर्नेछ।
अपग्रेड गरिएको मेडिकेयर योजना खोजक उपकरण कार्यान्वयन भइरहेको छ।
२०२० मा मेडिकेयरको खर्च के हुन्छ?
यहाँ यी परिवर्तनहरूको लागि लागतको एक ब्रेकडाउन छ:
भाग A: मेडिकेयर पार्ट प्रीमियम, जो प्रीमियम-रहित भाग A को लागि योग्य छैन, काम ईतिहासको आधारमा प्रति महिना2२2२-4588 सम्ममा हुनेछ। यो $ २0०- $7को २०१7 दरसँग तुलना गरिएको छ। घटाउन योग्य लागत $ १40०8 प्रति लाभ अवधि हो।
भाग बी: मेडिकेयर पार्ट बी प्रीमियम र मेडिकेयर पार्ट बी कटौती दुबै २०२० मा बढ्दै छन्।
प्रीमियम अब5१54.50० को सट्टामा4१44.60० हुनेछ।
कटौतीयोग्य १$$ from १ from देखि १ $ to मा बढेको छ।
भाग सी: २०२० मा एक सकारात्मक परिवर्तन भनेको मेडिकेयर एडवांटेज योजना प्रीमियमको औसत द्वारा घट्नु पर्छ २.%% २०१ prices को मूल्यबाट। यो प्रिमियम १ 13 बर्ष भन्दा बढी भएको सबैभन्दा कम हुनेछ।
भाग डी: मेडिकेयर कभरेज ग्याप - जसलाई पार्ट डी योजना डोनट होल पनि भनिन्छ, लाई कम गर्न, प्राप्तकर्ताले अब पार्ट डी प्रारम्भिक कभरेज अवधि पछि उनीहरूको औषधि लागतको २ 25% मात्र तिर्नु पर्छ। पहिले, डोनट होलमा, मेडिकेयरले केवल% 56% र व्यक्तिले बाँकी% 44% कभर गर्‍यो। प्रीमियम मेडिकेयर पार्ट डी को लागी $ at० मा सुरु हुने अनुमान गरिएको छ, जुन २०१ has पछि सबैभन्दा कम हुनेछ।
त्यहाँ मेडिकेयरमा केहि परिवर्तनहरू आउँदैछन्?
२०२० मा मेडिकेयरमा यी सबै अपेक्षित परिवर्तनहरू हुन्; यद्यपि, यो सम्भव छ कि त्यहाँ केहि बर्षहरूमा थप परिवर्तनहरू हुनेछन्। कोरोनाभाइरस सहित मेडिकेयरमा केहि थप गरिएको छ, सहित COVID-19 को लागी नि: शुल्क प्रयोगशाला परीक्षण र अस्थायी रूपमा मेडिकेयर भुक्तानको लागि विस्तार गर्दै टेलिहेल्थ सेवाहरू ।
तपाई मेडिकेयरका लागि योग्य हुनुहुन्छ कि छैन भनेर कहिले थाहा पाउन नामांकन खोल्नुहोस् हुन्छ, एकलकेयरमा धेरै उपयोगी लेखहरू छन्। तपाईं पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ मेडिकेयरको साथ एकलकेयर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कभरेजमा अधिक बचत गर्न मद्दतको लागि, चाहे त्यो ब्रान्ड-नाम वा जेनेरिक ड्रग्स हुन सक्छ — तर तपाईं तिनीहरूलाई सँगै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईको मूल्य मेडिकेयर मूल्य भन्दा कम छ भने तपाईले सिंगलकेयर प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ; यद्यपि ती लागतहरू तपाईंको कटौतीयोग्यमा गणना हुँदैनन्।
अर्को पढ्नुहोस्: मेडिकेड २०२० परिवर्तन हुन्छ
रिमिकेड बनाम हमीरा: मुख्य भिन्नता र समानताहरू
दिन को सबै भन्दा राम्रो समय xanax लिन को लागी
कसरी एक मूत्र पथ संक्रमण खाली गर्न
गर्भावस्था को बेलामा लिन को लागी सुरक्षित औषधि
सक्रिय चारकोल को लाभ के हो
मँ मतली र पेट खराब को लागी के लिन सक्छु?
के हुन्छ यदि तपाइँ २ 24 घण्टा मा दुई एलर्जी गोलियाँ लिनुहुन्छ